Wiishka Panoramic ee Shiinaha oo leh Codsi Weyn iyo Warshada Badbaadada Sare iyo alaab -qeybiyeyaasha | Tianhongyi
Wiishka Panoramic oo leh Codsi Ballaadhan iyo Ammaan Sare
Tianhongyi Viewing Elevator waa hawl farshaxan oo u saamaxaysa rakaabka in ay kor u fuulaan oo ay fiiriyaan masaafada oo ay iska eegaan muuqaalka bannaanka ee quruxda badan inta lagu jiro hawlgalka. Waxa kale oo ay dhismaha siinaysaa shakhsiyad nool, taas oo u furaysa hab cusub oo lagu daydo dhismayaasha casriga ah.
Tianhongyi Viewing Elevator waa hawl farshaxan oo u saamaxaysa rakaabka in ay kor u fuulaan oo ay fiiriyaan masaafada oo ay iska eegaan muuqaalka bannaanka ee quruxda badan inta lagu jiro hawlgalka. Waxa kale oo ay dhismaha siinaysaa shakhsiyad nool, taas oo u furaysa hab cusub oo lagu daydo dhismayaasha casriga ah. Waxaa jira wiishashka indho -indheynta ee wareegsan iyo kuwa afar gees leh. Darbiga dhinac ee wiishka ayaa qaadanaya galaas dabool leh oo laba-lakab leh, kaas oo raaxo leh, ammaan ah, raaxo leh oo wax ku ool ah, waana goob daawasho habboon.
1. Teknolojiyadda xakamaynta horumarsan, nabadgelyo iyo xasilooni iyo dareen fuushan oo raaxo leh, iyo xaglo badan oo ka baxsan muuqaalka jaranjarada, waxay u keenaysaa dadka isticmaala xoogaa raaxo ah iyo gabal cusub;
2. Naqshad caalami ah oo ku habboon rakaabka. Qaab dhismeedka birta dhalada ah ee wiishka daawashada ma aha oo kaliya mid si fiican u muujinaya meel bannaan, laakiin sidoo kale quruxda guud. Waxa kale oo loo qaabayn karaa iyada oo la raacayo shaqooyinka madaniga ah ee kala duwan, taas oo ku habboon oo degdeg ah, guud ahaan wareegsan, wareeg-wareeg ah, iyo laba jibbaaran;
3. Bandhig indho qabad leh iyo badhanno dareen-sare leh;
4. Gacan -ku -gacmeedka bani -aadmiga ah ayaa lagu daray dhismaha iyo deegaanka ku xeeran, ma aha oo kaliya inuu qayb ka noqdo dhismaha, laakiin wuxuu kaloo ku darayaa muuqaal qurux badan oo dhaqdhaqaaq leh;
5. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa dhismayaasha kala duwan ee dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay, sida suuqyada dukaamaysiga, hudheelada, dhismayaasha xafiisyada, meelaha dalxiiska, meelaha ugu sarreeya, iwm. waa: wiishka dhismaha birta wiishka, nooc-tilmaameedka indho-indhaynta wiishka daah daah gidaarka daboolka dibadda, iyo wiishka la xidhiidha ee taageeraya adeegyada qurxinta. Warshadaha ku lugta leh waxaa ka mid ah hoteellada waaweyn, suuqyada wax laga iibsado, dhismayaasha xafiisyada, shirkadaha horumarinta hantida ma guurtada ah, bangiyada, dhismayaasha qaybta maamulka ee dawladda, hoolalka bandhigyada, meelaha laga soo galo iyo meelaha laga baxo ee dhulka hoostiisa mara, iskuullada, tuulooyinka gaarka loo leeyahay iyo meelo kale.
Wiishka daawashada wuxuu leeyahay baabuur maraya inta u dhaxaysa ugu yaraan laba saf oo ah biraha hagaha adag ee toosan. Cabbirka iyo qaab -dhismeedka baabuurka ayaa ku habboon rakaabka inay galaan oo ka baxaan ama rartaan oo dejiyaan alaabta. Waa caado in wiishka loo tixgeliyo ereyga guud ee gaadiidka tooska ah ee dhismayaasha iyadoo aan loo eegin hababka wadista. Marka loo eego xawaaraha la qiimeeyay, waxaa loo qaybin karaa wiishashka xawaaraha hoose (ka hooseeya 1 m/s), wiishashka degdegga ah (1 illaa 2 m/s) iyo wiishashka xawaaraha sare (ka sarreeya 2 m/s). Wiishashka Haydarooliga ayaa bilaabay in la isticmaalo bartamihii qarnigii 19-aad, welina waxaa loo adeegsadaa dhismayaasha dhaadheer.
Wiishashka casriga ah wuxuu inta badan ka kooban yahay mashiinka jajabka, mashiinka albaabka, tareenka hago, aaladda miisaanka culus, aaladda badbaadada (sida xaddidaha xawaaraha, qalabka badbaadada iyo kaydinta, iwm), xadhigga siligga, xidhmada soo noqoshada, nidaamka korontada, baabuurka iyo albaabka hoolka, iwm. . Qaybahan ayaa siday u kala horreeyaan loogu rakibay qolofka iyo qolka mishiinka ee dhismaha. Guud ahaan, gudbinta khilaaf xadhigga siligga birta waa la qaatay. Xadhigga siliggu wuxuu maraa hareeraha xidhmada jarista, labada darafna waxay u kala xidhan yihiin baabuurka iyo miisaanka miisaanka. Matoorku wuxuu kaxeeyaa xidhmada goos gooska si uu gaadhigu kor iyo hoos ugu kaco. Wiishashka waxaa laga rabaa inay ahaadaan kuwo ammaan ah oo la isku haleyn karo, hufnaanta gudbinta sare, dheellitirka saxda ah, iyo fuulitaanka raaxada leh. Halbeegyada asaasiga ah ee wiishka waxaa inta badan ka mid ah culayska la qiimeeyay, tirada rakaabka, xawaaraha la qiimeeyay, cabbirka baabuurka iyo nooca marin -biyoodka.
Nidaamka goosashada waxaa ka mid ah matoor jahawareer ah, xidhmo goos goos ah, xadhig silig jiidis ah, dib -u -dejiye, bareeg, saldhig mashiinka jiidista, iyo giraan -gacmeed diidaya. Xirmada jaridda ayaa lagu rakibay dogobka xambaarsan. Mashiinka jiidista wiishka waa farsamada wadista ee hawlgalka wiishka. Waxay xambaarsan tahay dhammaan culeysyada (culeyska firfircoon iyo culeyska guurto ah) dhammaan qeybaha dhaqdhaqaaqyada qaadista ee isweydaarsiga iyada oo loo marayo xirmidda jeexitaanka iyada oo loo adeegsanayo dogob xambaarsan culeys. Ilkaha xamuulka qaada ayaa inta badan qaata qaab-dhismeedka I-steel.
Nidaamka magdhawga ganaaxu wuxuu ka kooban yahay dhammaanqaybaha dhismaha ee baabuurka iyo miisaanka miisaanka, xadhigga magdhowga, danjiraha iyo wixii la mid ah. Baabuurka iyo miisaanka miisaanka leh ayaa ah qaybaha ugu waaweyn ee wiishka si toos ah u socda, baabuurkuna waa weel lagu qaado rakaabka iyo alaabta.
Nidaamka hagista waxaa ku jira qaybo ay ka mid yihiin biraha hagaha iyo kabaha hagaha si ay u hagaan dhaqdhaqaaqa kor u qaadista toosan ee baabuurka iyo miisaanka miisaanka.
Nidaamka korontadu waa nidaamka koontaroolka wiishka, oo ay ku jiraan sanduuqa koontaroolka, sanduuqa wicitaanka dibadda, badhamada, xiriiriyeyaasha, gudbinta, iyo kontaroolayaasha.
Qalabka badbaadada Xaddidaadda xawaaraha, qalabka badbaadada, keydinta, aaladaha kala duwan ee badbaadada albaabka, iwm.
Naqshadeynta iyo soo saarista qaab dhismeedka biraha ee wiishka daawashada. Marka loo eego baaxadda sawirrada injineernimada madaniga ee wiishka indha -indheynta, qaab -dhismeedka biraha ugu weyn ee wiishka indho -indheynta ee ka hooseeya 6 dabaq wuxuu noqon karaa 150mm × 150mm × 0.5mm bir labajibbaaran, iyo isgoysku waa 120mm × 80mm × 0.5mm bir labajibbaaran. Naqshadeynta qolka kombiyuutarka, marka loo eego heerka qaranka, dhererka sagxadda sare ee qolka mashiinku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 4.5 mitir dherer cad. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo saxan aluminium caag ah oo aan iftiin lahayn dusha sare ee dhismaha birta si loo ilaaliyo martida.
Saqafka la laalay
Hore: Baxiyaha Gudaha iyo Dibadda
Xiga: Wiishka Xamuulka Rakaabka ee Xamuulka ah ee Asynchronous
Wiishka Jiidashada ee Gears iyo Gearless
Wiishka Raadinta ee Geedsan
Wiishashka Jiidashada Gearless
Wiishashka Jiidaha Degaanka
Wiishka Xamuulka Rakaabka ee Xamuulka ah ee Asynchronous
Wiishka Guriga Yar ee Qiimaha leh
Rakaabka Raadinta Wiishka Qolka Mashiinka